Bruno Fernandes oo ugu dambey ka hadlay wixii isaga iyo Pep Guardiola ku dhex maray kulankii Manchester Derby – Gool FM
Bruno Fernandes oo ugu dambey ka hadlay wixii isaga iyo Pep Guardiola ku dhex maray kulankii Manchester Derby
(Manchester) 13 Mar 2020. Laacibka qadka dhexe ee kooxda Man United ee Bruno Fernandes ayaa ka hadlay falkii muranka dhaliyay uu kula kacay macalinka reer Spain iyo naadiga Man City ee Pep Guardiola inta lagu jiray kulankii Manchester Derby.
Bruno Fernandes ayaa waxay murmeen Guardiola intii lagu jiray kulankii Manchester derby ee ku soo idlaaday 2-0 ay ku adkaatay Red Devils, kaasoo qeyb ka ahaa kulamada 29-aad ee horyaalka Premier League.
Wargeyska “Daily Mail” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Bruno Fernandes, wuxuuna yiri:
“Waxaan kala hadlay dhacdadan qaar ka mid ah asxaabta, dadka qaar waxay aaminsanyihiin in Pep uu ku soo guuleystay wax walba, waase kuma Bruno si uu sidaas ugu sameeyo?”.
“Uma maleynayo inay tahay arrin la xiriirta ixtiraam, waqti xaadirkan waan daganahay waxaana joogaa garoonka banaankiisa, mana sameyn laheyn arrintaas markale haddii aan hadda halkaas joogi lahaa”.
“Waqtigaas, ereyadii uu dhahay Pep Guardiola ayaa iga careysiisay, garoonka dhexdiisa waxaan dareemayay wax yar oo walwal ah, waxaan ka mid ahay ciyaartoyga qaar ee noocan ah”.
Thomas Partey oo bar-tilmaameed u noqday mid ka mid ah kooxaha waa weyn ee Premier League
Tababare Solskjær oo ka hadlay mustaqbalka Paul Pogba ee kooxda Man United